ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: August 2010
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က စိတ်က အချဉ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ မဲဆောက်ကဗျာလေးရေးလိုက်တာ လာဖတ်တဲ့သူတွေက ၀င်နှောသွားတာတွေ့တော့ သဘောကျသွားတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ကျနော်သိသသလောက် ကျနော် မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ မဲဆောက်အကြောင်းလေးရေးဖို့စိတ်ကူးမိတယ် ။ မဲဆောက်ဆိုတာနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က မြို့လေးတစ်မြို့ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ ။ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်တောင်တွေက ၀ိုင်းနေသလိုနဲ့ ရာသီဥတုလည်း သင့်တင့်မျှတဲ့တဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ပါ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်လို့ကောင်းတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများတယ် ။အရင်တုန်းကတော့ မဲဆောက်မှာ မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်ဘက်က နယ်ခံတွေများပေမယ့် ခုတော့ မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားက သူတွေကိုပါတွေ့ရပါတယ် ။
ရောက်စတုန်းကတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရှိသေးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် နေတာကြာသွားလို့ပဲလားတော့မသိ အဲ့ဒီအစွဲပျောက်သွားတယ် ။ ထိုင်း သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကလည်း ဗမာ တွေဘာတွေလုပ်နေပါဘူး လူချင်းအတူတူပါပဲတဲ့ လေးစားဖို့ကောင်းတယ် ခေတ်လူငယ်တစ်ချို့နဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရတာ ကျနော်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ် ။ မဲဆောက်မှာ စက်ရုံလုပ်သားကတော့ အဓိကဖြစ်ပြီး ကျန်တာကတော့အရောင်းဝယ်ပါ ကျောက် ၊ အထည် ၊ စက်ပစ်စည်း နဲ့ စားသောက်ကုန်တွေက အဓိက ကုန်စည်တွေပါ ။မြ၀တီ မဲဆောက်ကို ချစ်ကြည်ရေးတံတားအပါအ၀င် အောက်ဂိတ်လို့ခေါ်တဲ့ လှေနဲ့ ကုန်သည်လို့ရတဲ့ လက်မှတ်အခက်အခဲရှိသောတိုင်းရင်းသားများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဂိတ် ၁၇ ဂိတ်ကျော်ရှိပါတယ် (ကျနော်သိသလောက်ပါ ) ။
မဲဆောက်က မြန်မာလုပ်သားများအတွက် အားကိုးအားထားရတစ်ခုတော့ ကျန်းမာေ၇းနဲ့ပက်သက်ရင် အချိန်မရွေးကုသခွင့် ဘတ် ၃၀ ပဲ လတ်မှတ်ခ ပေးရပြီး မတတ်နိုင်၇င်လည်း အလကားလုပ်ပေးတဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်သည်များ မြန်မာဘက်က ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်လို့တကူးတက လာရောက်ကုသကြတဲ့ သူများ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ လာရောက်ကုန်သသူများနဲ့ အမြဲတမ်းလူများနေတဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခုပါ ။မဲဆောက်မှာ မြန်မာ လူသုံးကုန်များ မရှိဘူးဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ ကွမ်းသီး ၊ ကွမ်းမှအစ မြန်မာဆေးမျိုးစုံလည်းရနိုင်ပါတယ် ။ လုပ်အားခကတော့ ကျနော့်အထင် နည်းကြမယ်ထင်ပါတယ် ကျနော်ဆို စားဖို့သောက်ဖို့ကလွဲပြီး အကြွေးတောင် တင် နေလို့ခက်နေတာ ဟဲဟဲ တော်ပြီး ပြောတော့ဘူး ။ အိမ်အကူ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို တစ်လ 2000 အများဆုံးပဲပေးကြပါတယ် ဒါကလည်း အပြစ်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး ကြိုက်ရာအလုပ်သမားကို အချိန်မရွေးခေါ်နိုင်တော့ သူဌေးတွေက သိပ်အလေးမထားတာလည်းပါ ပါတယ် ။
မြန်မာစကားကို မွှတ်နေအောင်တတ်တဲ့ ထိူုင်း တွေနဲ့ ထိုင်းစကားကို အရည်ကျိုသောက်မတတ်ပြောနိုင်တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံလည်းရှိပါတယ် တစ်ချို့ဆိုထိုင်းကျောင်းပါနေခွင့်ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ် ။ မဲဆောက်မှာ လာအလုပ်လုပ်ကြရင်း ဒီမှာပဲ ညားကြ ပြီးတော့ ခလေးတွေရကြရင် အဲ့ခလေးတွေက ထိုင်းစကားကို မြန်မာစကားထပ်ပိုကျွမ်းကျင်သွားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ယဉ်ကျေးမှုချင်းကတော့သိပ်ကွာခြားတယ်ပြောလို့မရပေမယ့် ကျနော်တို့လူမျိုးတွေဆိုရင် ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဆိုရင် နိမ့်တဲ့နေရာမှာဆင်းထိုင်ပြီး အရိုသေပေးကြပေမယ့် ဒီမှာကတော့ ဘုန်းကြီးလည်း ခုံပေါ်ထိုင် သူတို့လည်း ခုံပေါ်ထိုင် ပြီးရင်လက်အုပ်လေးချီပြီးတရားနာတာလောက်ပါပဲ ဘာသာရေးထပ် ဘုရင်ကိုကိုးကွယ်မှုလွန်ကဲနေတဲ့ စနစ်လို့ထင်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပဲလားတော့မသိ ချစ်ေ၇းချစ်ရာများ အိမ်ထောင်ေ၇းတွေကတော့ ကိုယ်တွေစိတ်နဲ့လုံးလုံးဆန့်ကျင်နေတာပါပဲ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရည်းစားများရင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပြောစရာတွေဖြစ်ပေမယ့် ဒီမှာကျတော့ ဘယ်သူကမှ အရေးမထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ် ။
အပေါ်က စရိုက်မျိုးကို ဘယ်လိုနေရာမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရသလဲဆိုတော့ အိမ်ထောင်ရှိလျှက်နဲ့ နောက်ရည်းစားထားရင် အဲ့အသုံးနှုန်းကို ““ကစ်””လို့ခေါ်ပါတယ် (ဘာကစ်တာလဲတော့မသိ ) အဲ့ ““ကစ်”” ထပ် နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဆိုရင် “ကာ့” လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ ။ ပြီးတော့ တရားဝင်လူသိရှင်ကြားလပ်မထပ်သေးကြပေမယ့် တူတူနေတဲ့သူတစ်ချို့ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် တရားဝင်ယောက်ျားကို “ ဖူဝယ်” ၊ တရားဝင်ဇနီးကို “မြား ” လို့ခေါ်ဆိုကြပြီး မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲတူတူနေကြသူတွေကိုတော့ “ဖန် ” ချစ်သူ လို့ပဲ သတ်မှတ်ကြတာကို ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရပါတယ် ။ပညာရေးစနစ် ကိုလည်း အစိုးရကအများကြီးထောက်ပံ့ထားပေမယ့် ထိုင်းကျောင်းသားတွေက ကျနော်ကတော့ ညံ့တယ်လို့ထင်ပါတယ် အထက်တန်းအောင်ထားတဲ့ အလူုပ်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ Happy Birthday ကိုတောင် မှန်အောင်မပေါင်းနိုင်တာဟာလည်း ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မိခင်မွေးရပ်မြေမဟုတ်ပေမယ့် နွေးနွေးထွေးနွေးအမြဲကြိုဆိုပေးနေတဲ့ မဲဆောက် မြို့ ကလေးကို ကျနော်ကတော့ချစ်ပါတယ် နောက်များလည်း အဆင်သင့်ရင် ဆက်ရေးပါအုံးမယ် နောက်ထပ်လည်း ရေးစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် ကြက်ပေါင်အကြောင်း အပါအ၀င်ပေ့ါ ။မဲဆောက်မြို့ ပုံတစ်ချို့ကိုတော့ ကျနော့်ဆြာ ကိုသင်္ကြန်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးကျေးဇူး ။
ကားဂိတ်၊ ဆိုင်ကယ်ဂိတ်တွေဆိုက်တာနဲ့ မြင်ရတဲ့ မဲဆောက်ဈေးအ၀င်ဝပုံပါ ။
မဲဆောက်စာတိုက်ပါ ဒီပုံကိုကြည့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တော်တဲ့ ဆြာ့ကိုလေးစားသွားတယ် ကျနော်သာရိုက်ရင်တစ်ပိုင်းပဲပေါ်မှား)
မဲဆောက်ဆေးရုံပါ အစိုးရဆေးရုံမဟုတ်တော့ ဈေးကြီးတယ်လို့ကြားဖူးတယ် ။
မဲဆောက်မှာ ထိုင်းတရုတ်တွေလည်းများပါတယ် ဒီပုံကတော့ မြို့လယ်က တရုတ်ဘုံကျောင်းပါ ။
အာရှလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ မဲဆောက်ပန်းခြံပါ ။
မဲဆောက်ဈေးအနီးတစ်နေရာ မြေညီထပ်တွေကို ဆိုင်ခန်းဖွင့်ထားကြတာများပါတယ် ။
Voice of little birds
Shining of dawn open my eyes
But I need your smile
For open my heart.
Did you touch the rain this morning???
Cause this rain carry my heart to you
Miss you in the rain.
When I got hungrier
That mean I felt
I miss u more .
Among 100 percent in my soul
I used 50% to love
20% miss and
30 % to worry for my lover
So all of my heart for only you.
P_S> ဆယ်တန်းတုန်းက အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်ထူးထွက်ဖို့ ၃၅ မှတ်ပဲလိုတဲ့ အီးကဗျာ ဆရာကြီးရဲ့ တစ်ပုဒ်တည်းသော အီးကဗျာလေးပါ အဲ့လောက်ကတော့ ၈တန်းကျောင်းသားတောင်ေ၇းတတ်သေးတယ်လို့ အားနာပြီး မပြောခဲ့ဘူးထင်တာပဲး)
ပထ၀ီ ၊တေဇော ၊ အာဘော ၊၀ါရော
အခုတော့ ကိုယ့်မှာ မရှူနိုင် မကယ်နိုင်
အမေ ရေ သားတော့ ဆေးစားမှားပြီးထင်ပါ့ ...။
အဆင်မပြေလိုက်ပုံများကတော့ မြ၀တီ မဲဆောက် တံတား ပိတ်လိုက်တည်းက ကိုယ့်အနာဂတ်က ရေပေါ်ကို လမ်းလျှောက်ရသလိုပါပဲ ။ လခက မရေမရာ ဘော့စ်ကလည်း အလုပ်သစ်ရှာရင် ရှာကြတော့တဲ့ ပြုံးစိစိနဲ့ တကယ်ပြောတာလားမသိတော့ မချိသွားဖြဲနဲ့ “ဟဲဟဲ ” လုပ်လိုက်ရတယ်။ အလုပ်က ၄ ရက်ဆက်ပိတ်တော့ အိမ်ပြန်ကြတဲ့သူတွေများတယ် သူတို့က နီးနီးနားနားဆိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့လေ ကိုယ့်မှာသာ တစ်ယောက်တည်းဘယ်သွားရမှန်းလည်းမသိ။ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ညက စိမ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေ လျှော်ဖို့ လုပ်တော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့ အင်္ကျီအဖြူလေးက အနီရောင်ကိုဖြစ်လို့ ဟမ်း ဆေးရောင်ကျမယ့် အ၀တ်သစ်ကလည်းတစ်ထည်မှမရှိပါဘူးလို့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ အကြမ်းပုဆိုးက ဆေးရောင်တွေ ခုထိကျတုန်း အော် ပြည်တွင်းဖြစ် ပြည်တွင်းဖြစ် ...................။
တစ်နေ့ညက ယောကျာ်းဆိုတာ မလုပ်ဖူးတာမရှိရဘူးတဲ့ အဲ့စကားကြားဖူးတာပဲ အဲ့ ပေါက်ကရတွေ လိုက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ထိုင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ ညကလပ်ကိုရောက်သွားတယ် ။ အာပါးပါးအလန်းတွေ လန်းလွန်းလို့ မျက်လုံးတွေပြာကုန်တယ် ဘီယာလောက်ပဲ သောက်တတ်တဲ့ကိုယ် အရက်ပြင်းကြီးတွေမော့ရတာလည်ချောင်းတွေပါနာတယ် ။ သီချင်းကလည်း မြူးတော့မြူးတယ် ဒါပေမယ့် တစ်လုံးမှနားမလည်တဲ့သီချင်းတွေ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ မူးမူးနဲ့ ကလိုက်ကြတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ငေါင်တောင်တောင် ။ ညာဘက်ဝိုင်းက ပန်းရောင် ဂါဝန်တိုလေးဝတ်ထားတဲ့ တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို စွေကြည့် စွေကြည့်နဲ့ မိုက်တော့မိုက်တယ်ဗျး) ကြိုးပျောက်နဲ့ တာ့တာ့ လှမ်းပြတယ် ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး တာ့တာ့ပြန်ပြလိုက်တယ် ခဏနေတော့ ဖုန်းထိုးပေတယ် “ အလိုင်နား ” ဆိုတော့ ဖုန်းနံပါတ်တဲ့ ချောက်တွန်းတာ သူငယ်ချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြီး နှိပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။
နောက်နေ့ ရုံးရောက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းက ဆဲလိုက်လေခြင်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပန်းရောင် ဂါဝန်တိုလေး က အခြောက်ကြီးတဲ့ သိမှမသိတာ မသိဘူးလို့ ငါကမင်းအကြိုက်ပုံလေးဆိုတော့ မင်းဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တာ ပြောလိုက်တယ် ။ အဲ့ကိုသွားတာ သတင်းကြားသွားတဲ့ ဘော့စ်က အကျင့်တွေ ပျက်နေင်္ပြီး ချောင်ချောင် သတိထားတဲ့ “ခပ် ” လို့နာခံလိုက်တယ်း) ။
ပိတ်ရက်မှာ အိပ်လိုက် စားလိုက် လုပ်ရတာများတော့ အားနည်းနေလို့ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ငှက်သိုက်ဗူး ဖောက်သောက်တာ တောသားဆိုတော့ မဖွင့်တတ်ဘူးရယ် ဓားတွေနဲ့ ကလော် ကပ်ကြေးတွေနဲ့ ကလော် ဘယ်လိုမှမပွင့် ညာလက်ခလယ် လက်ထိပ် ဓားထိသွားကော ဓားထိသွားမှပဲ လှည့်ဖွင့်ကြည့်တာ လွယ်၂ပွင့်သွားတယ် အော် ဖြစ်ရလေ စောနက အသားကုန် ကလော်ထုတ်နေတော့ မပွင့်ဘူး အခုကျတော့ ပွင့်တယ် ခု နာနာနဲ့ လက်ညှိုးနဲ့ လက်မပဲ သုံးပြီး ပို့စ်အသစ်မတင်ရတာကြာတော့
လာတင်တာ ဘလော့ဂါလုပ်ရတာမလွယ်တာ ဘာတဲ့ ဟိုအစ်ကိုကြီးပြောတဲ့ ရင်လှိုက်ပိုးလား ရင်ကိုက်ပိုးလား အဲ့ပိုးက မသေတော့လည်း ကိုယ့် ဒွတ်ခ ကိုယ်ရှာပေါ့ ။
ပျင်းလို့ ကိုရီးယား ကားတွေကြည့်မလို့ လုပ်တာ ကွန်နက်ရှင်ကနှေးနေတယ် ကြည့်မရ ။ ဒါနဲ့ပဲ ချစ်သူဆီကိုပို့ဖို့ ကဗျာတွေ အင်တာနင်က ခိုးကူးမလို့ လိုက်ကြည့်နေတုန်း စိတ်ကြိုက်တွေ့တဲ့ ကိုလင်းဒီပ ဆီက ကဗျာလေး ကူးမလို့ လုပ်တုန်း ဘောပင်အသစ်ကြီးက မှင်မထွက်ဘူး ***** တက်နင်းချပစ်လိုက်တယ် အဲ့လောက်တောင် လွဲချင်အုံးး မိုးအေးအေးနဲ့ တက်အိပ်တာပဲကောင်းတယ် ။
ဟလို.... ဟိုလာ တက်စ်စီ 1-2-၃ ကြားလား ကြောင်လား
ကြားချင်ကြား မကြားချင်နေ မြင်အောင်ကြည့် တွေ့အောင်ရှာ။
ရိုသေ ငါးစားရပါသော ဘာမသိ ညာမသိ အ၀ှာငြိတဲ့ သဘာငတိခင်ဗျား ကျနော်ကတော့ လူတကာကို ကလိတဲ့ ရဲလေးအာဇာရော်နယ်ဗေဗေမောင်ကြောင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ယ မှာ အမှိုက်ကောက်တဲ့ အလုပ်က အောက်ဆိုဒ်မရှိတော့ အဆင်ပြေလို ပြေငြား အချိန်တိုအတွင်း ထိုးဖောက်ပေါ နိုင်လွန်းသော ငပေါများဂေဟာမှာ ညစောင့်အလုပ်လေးများ ရမလားလို့ ဆင်စားနေတုန်း မိုက်ဖော် မိုက်ဖက် ရွာတောင်ပိုင်းမှာ ကြက်ခိုးစားတုန်းက သူငယ်ဂျိုးကြီး ၁လိန်၂လိန် လိန်ချင်တာ လိန်က ကျန်းမာရေးဝံကြီးနေရာ လွတ်နေတယ်ဆိုတော့ အပြေးအလွှား လုံချည်မပါပဲ ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ဆြာဝန်လုပ်ဖူးတယ်ခင်ဗျ။ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လည်းရှိပါတယ် လုပ်သက်ကတော့ မနေ့က ၁ ရက်ပြည့်တယ်။ ဦးသာဂိကြီး ပုရွတ်ဆိတ်ကိုက်တုန်းက အဆိပ်ပျံ့ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှာ စိုးတာကြောင့် ခြေတောက်ကို ပေါက်တူးနဲ့ တစ်ခါတည်း ဖြတ်ပစ်လိုက်တာ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့တဲ့ဗျာ သူ့အမျိုးတွေ ဓားမတွေ နဲ့ အိမ်ထဲကို လက်ဆောင်လာပစ်ပေးတာ။ အိမ်ကကြောင်မကြီး သားကျတော့လည်း ၄ ကောင်ပဲမွေးလို့ ဗိုက်ကို အတင်းညှစ်ချပစ်လိုက်တာ နောက်ထပ်တစ်ကောင် "ပလွတ်" ထွက်လာတာ ပြီးတာနဲ့ ကြောင်မကြီးလဲ ကြောင်ရွာစံသွားတယ်။ အင်းး သေခြင်းတရားက ဘယ်သူရှောင်လို့ရမှာတဲ့လဲ နှစ်ရာနဲ့ဖြေပေါ့။ ဒါတွေက သိအောင်ပြောပြတာပါ ကြွားတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ လူကြားထဲရောက် ပန်း (လေ) တက်တဲ့ အကျင့်ပါနေလို့ပါ သဘာငတိခင်ဗျာ။
ကျနော်ဖော်ထားတဲ့ဆေးတွေနဲ့ ကုသနည်း တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1 .၀မ်းကိုက် ၀မ်းလျှော ရောဂါ ဖြစ်လျှင် ကုတ်ကိုသီးနဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်စား
2. ငါးရိုးဆူးလျှင် လည်ချောင်းကို ဓားမြှောင်နဲ့ကလော်ထုတ်
3 .ခေါင်းမူးလျှင် အရက်သောက်
4 .လက်နာလျှင် ခုတ်ဖြတ်
5. မျက်စိနာလျှင် ဖောက်ထုတ်
ဒါ့အပြင် ဂိုဏ်းကြီးရှိ သဘာငတိနှင့်တစ်ကွ ဂိုဏ်သားများ အားလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကျနော် ဒေါက်တိုကြောင်ကြောင်မှ စွမ်းစွမ်းတမံ စောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင် ဇီးဖျော်ရည်သောက်ပြီး သစ္စာကို အနမ်းပေးပါတယ် ။
ဒီလောက် ပညာအရေးချင်းနဲ့ဆို အလုပ်ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် (ပေးမှာလား မပေးဘူးလား မပေးရင်တွေ့မယ် ရွာထိပ်က ထန်းတောမှာ)။ အလုပ်ခန့်ရင် ပျက်ရက်မပါ တစ်လမှာ ခွင့် ၂၉ ရက်လိုချင်ပါတယ် အကြောင်းမှာ ဒီဝင်ငွေနဲ့ မလောက်ရင် အပြင်ဆေးခန်းထိုင်ရမှာမို့ပါ ။ ဂိုဏ်းကြီးမှ ချမှတ်သော စည်းကမ်းချက်များကို တစ်သွေမတိမ်း ဖယ်ရှောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေများ ခွဲဝေလျှင်လည်း အညီမျှ လိုချင်ပါသည် ။စည်းဝေးပွဲများကို အဝေးရောက် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး လူနာကျလွန်းလျှင် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ။ အမျိုးသား၊ သက်ကြီးရွယ်အို နှင့် ခလေးသူငယ်များကို လက်ထောက်များနှင့် လွှဲပြီး ခပ်ငယ်ငယ်ချောချော အမျိုးသမီးများအား မည်သည့်ရောဂါမဆို ကိုယ်တိုင်ကုသပေးမည်။ ယခု လျှောက်လွှာအား ပယ်ချလျှင် အသရည်ဖျက်မှူဖြင့် တရားစွဲဆို လျော်ကြေးတောင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း ချုပ်ပါတယ် နိဂုံး ။
အမည်........ အပေါ်မှာ ပြောပြထားပြီးပြီး နှစ်ခါမပြောဘူး အာညောင်းလို့
အသက်.......... ရှူး တိုးတိုး သေမင်းကြားရင် လာခေါ်နေလိမ့်မယ်
နေရပ်.............. လာချင်ရင် အနီးလေးအထပ်ထပ် မခေါ်ပါခင်ဗျား (သိသွားမှာကြောက်လို့)
ပညာအရည်အချင်း.... PHc> MBBS> တံတားဆောက်လုပ်ရေး
ပရော်ဆော်ဖာ ဒေါက်တို -ကြောင်မျိုး
13/1/2009 တုန်းက အမှတ်တရ ရေးထားတဲ့ပို့စ်လေးပါး) ။
ရိုးသားမှုတွေနဲ့ ထင်ဟပ်နေ ၊
ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေးတွေကို မြင်ယောင်မိတယ်
အားကိုလိုမှုတွေနဲ့မလှပတဲ့ လက်ရေး
ခြစ်ရာ ဖျက်ရာတွေနဲ့ကြိုးကြိုးစားစား ရေးလိုက်တဲ့စာ..............................။
ချစ်ရသော ဦးသားလေး ..........
သတိရစွာဖြင့် သား စာရေးလိုက်ပါတယ် ဦးသားလေး နေကောင်းရဲ့လား အလုပ်အကိုင်ကောအဆင်ပြေရဲ့လား ..........
အဖေ နဲ့အမေ စကားကိုလည်း သားနားထောင်ပါတယ် စားလည်းကြိုးစားတယ် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ဆိုင်မှာအရင်က ဦးသားလေး အလုပ်တွေကို သား နဲ့ကိုကြီးက ၀ိုင်းလုပ်ပါတယ်။ သားတို့မိသားစုလည်း နေကောင်းပါတယ် သားစာကြိုးစားပြီး ပညာတက်ကြီးဖြစ်ရင် အဖေ အမေ နဲ့ဦးသားလေး ကို ပြန်ရှာကျွေးပါ့မယ်။
ဦးသားလေး အလုပ်အဆင်ပြေပါစေလို့သား ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။ ကျောင်းတွေ ဖွင့်တော့မယ်လေ ဦးသားလေး သားကို နာရီ ၊ ဖိနပ် အ၀တ်စားတွေ ၀ယ်ပေးလိုက်နော် မ၀ယ်ပေးလိုက်ရင်လည်း ဦးသားလေး မအားလို့မ၀ယ်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်မှာပါ။
ဦးသားလေး မီး စားရေလိုက်တယ်။
ဦးသားလေး နေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
အမေ ပြောတော့ ကျောင်းတက်ရင် ထီးအသစ်လေး နဲ့ဂါဝန်အသစ်လေးတွေ ၀ယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး မ၀ယ်ပေးသေးဘူး လွယ်အိတ်ကလည်း ပြဲနေပြီး ဦးသားလေး မီး ကို ၀ယ်ပေးလိုက်နော် ။
မီး ...ဒါပဲပြောမယ် ။
အပေါ်က စာနှစ်စောင်ကတော့ တစ်နေ့ က လူကြုံနဲ့အိမ်က တူလေး နဲ့တူမအငယ်ဆုံးလေး ကျနော့်ဆီကို ရေးလိုက်တာပါ လက်ရေးလေးတွေက မလှမပ ၊စာလုံးပေါင်းတွေကလည်းမှား ၊ ဖျက်ရာတွေနဲ့စာရွက်ကလည်း ပေလူးနေတာပဲး) ပြီးတော့ ထမင်းလုံးနဲ့ကပ်ပြီး သူတို့ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ဦးသားလေး ကို အားကိုးတစ်ကြီးနဲ့ပို့ လိုက်တာလေ ဖတ်ပြီး ရယ်နေရတာ အရမ်းပဲ စာလုံးပေါင်းလေးတွေ ပြင်ပြီး သူတို့ ရေးလိုက်တဲ့အတိုင်း အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်လိုက်တာပါ ။ ဒီနှစ်မှ (၁၀) တန်းတက်မယ့် တူအကြီးဆုံးက ရည်းစားထားတက်နေပြီးတဲ့ ဦးလေး ဆီကို စာရေးဖို့ တောင်သတိမရတော့ဘူးလို့အစ်မ ကပြောတယ် ။ တယ်တော်တဲ့ ငါ့တူပါလားဟ ဦးလေးနဲ့များကွာပါ့ ပြန်မှ နားရင်းကို (၃) ချက်လောက် အုပ်ပစ်လိုက်အုံးမယ် ဟဲဟဲ ငါတောင်မရသေးဘူး မင်းက ထားစရာလား ( မနာလိုတာ ) ဦးလေးဆိုတဲ့ ပါဝါက နည်းတာမှတ်လို့နိုင်လို့ ရတဲ့သူကိုပဲနိုင်ရတာလေး) ။
ပြန်စာ။ ။ ခလေး တို့ ရေ့ အခုတော့ ဦးသားလေး လည်း ငတ်ပြတ်နေလို့နောက်တော့ ပို့ ပေးလိုက်မယ်နော့်း)
at 12:35 AM7comments